Iidandelion tattoos kunye nentsingiselo yazo | Ukuzoba
Ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yeetatoo ezaziwa kakhulu phakathi kwamantombazana nabafazi. Injalo loo nto, sithetha ngayo Iidandelion tattoos. Asikokokuqala sithetha Ukuzoba Olu hlobo lweeTattoo ukusukela kunyaka ophelileyo, iqabane lam uMaria Jose sele esixelele malunga neetattoos zale ntyatyambo intle kwaye intekenteke. Nangona kwaye ngelo xesha, sathetha ngakumbi ngoluvo kunentsingiselo kunye nesimboli yale tattoo inayo.
Kwaye yile nto siza kuthetha ngayo kweli nqaku, siza kuchaza uphawu kunye nentsingiselo yokuba Iidandelion tattoos kunye nezizathu zokuba umntu abambe le tattoo kulusu lwakhe. Kwelinye icala, siya kunika ezinye izimvo zokufumana i-tattoo yoqobo kunye eyahlukileyo.
1 Zithetha ntoni iidandelion tattoos?
2 Intsingiselo yokomoya
3 Uyilo lweTatoo yeDandelion
4 I-Dandelion tattoo ngeeleta
5 Uyifumana phi i-dandelion tattoo
6 Ixabiso leDandelion Tattoo
7 Iifoto zeDandelion Tattoos
Zithetha ntoni iidandelion tattoos?
Ngoku ukuba uzimisele (okanye uzimisele) uku Umvambo wedandelionndiyaqikelela ungathanda ukwazi yintoni le tattoo kwaye iyathetha. Intyatyambo yedandelion sesinye sezona zixhaphakileyo zezityalo ezinokubakho, ikhula ngobuninzi kwaye isebenza kuwo nawuphi na ummandla wehlabathi. Kwaye yile, nangona kunokubonakala ngathi sithetha ngomvambo ofuzisela ubuninzi, akukho nto iqhubekayo kwinyani.
Ubu ethe-ethe bayo kwaye inxulunyaniswa nabantwana kunye nabantu abancinci (sonke siye savuthela ezinye iidandelions njengabantwana) zenza ezi tattoos zifanekisela umsulwa, ubunyulu kunye nostalgia. Ngaphandle koku, asinakushiya ecaleni ukuba abantu abaninzi bayayipha le ntyatyambo ukumela umzuzu othile ebomini babo okanye inkumbulo esingafuniyo ukuba ixesha lijike lingwevu kwaye lingacaci.
Njengoko besitshilo kakuhle, ubumsulwa yenye ye Iintsingiselo ezinkulu ezibonakaliswa kumvambo onje. Kodwa sinokuqhubeka kancinci. Intsingiselo yokomoya yeedandelion tattoos zidibanisa okwangoku kunye nexesha elidlulileyo. Ewe isenokuvakala ingaqhelekanga kodwa ayisiyiyo. Yindlela yokungazilibali iinkumbulo ezimnandi zobuntwana, zokuhlala unxibelelana nayo kwaye ukhulule amaxesha amyoli, okanye ubuncinci, ngaphandle kweengxaki ezinkulu. Umlingo kunye neminqweno ikwanxulumene nomqondiso wayo. Nangona isityalo uqobo sithathwa njengomlingo ngelinye ixesha, ebusweni bentsingiselo yaso besingazukushiyeka ngasemva.
Kubukristu kwathiwa esi sityalo sasidibene nothando lukaYesu. Kuyafana nethamsanqa elihlala lihamba nawe. Ukusuka kwinto esinokuthi ukuba luphawu oluqinisekileyo kwaye kwangaxeshanye luhambelana nokusinda, ukuphilisa kunye namandla.
Uyilo lweTatoo yeDandelion
Kungcono ukuba ujonge ukugqibezela Igalari yedandelion tattoo onayo apha ngezantsi. Ewe kunjalo, xa kufikwa ekuthetheni yoyilo, siyabona ukuba kukho enye eyoyisa ngaphezulu kwayo yonke, ubuncinci ekuthandeni kunye nakumaxesha ama tattoo. Kwaye yidandelion ekhutshelwe ngaphandle kwaye iintyatyambo zayo zajika zaba ziintaka ezincinci.
Nangona kwaye sithathela ingqalelo ukuba le tattoo "ibonwa kakhulu", ngokobuqu ndingakhetha into eyahlukileyo, ngoku, into esiza kuphawula ngayo ngoku luluvo lobuqu kunayo nantoni na eyenye. Kwelam icala, kwaye ukuba kuye kwafuneka ndinike uluvo lwam kumntu ofuna ukwenza i-dandelion tattoo, bendiya kubaxelela ukuba bakhethe uhlobo olwahlukileyo, uyilo olunjenge-watercolor oluchukumisa i-abstract lungalunga kakhulu. Kwaye ke simka kwi-dandelion yesiqhelo kunye nomhlambi weentaka.
I-Dandelion tattoo ngeeleta
Njengakwezinye iintlobo zeetattoos, sinokuzonwabisa ngokwahluka okuninzi kule. Enye yazo kukubona ukuba I-Dandelion tattoo eneeleta ithatha indawo yokuqala. Mhlawumbi kungenxa yokuba ukongeza ekubeni nayo yonke into ebonakalisileyo esiyikhankanyileyo, songeza intsingiselo entsha kuyo. Sityala oku koonobumba abaya kwenza amagama athile okanye amabinzana.
Eyona nto ixhaphakileyo kukubona amagama enkuthazo okanye loo mabinzana mahle ahlala esikhumbuza ukuba kufuneka siqhubeke silwa yonke imihla. Ewe kunjalo, kungcono ukhethe amabinzana amafutshane ukuze angabusebenzisi ubuhle bedandelion. Umbono wokuqala kukuxuba indawo yembewu kunye unobumba ngamnye ezakwenza igama. Kule meko, kungcono ukuba ligama elifanelekileyo.
Uyifumana phi i-dandelion tattoo
Njengeentsingiselo zayo ezahlukeneyo, i-dandelion nayo ingangumboniso ophambili weendawo ezahlukeneyo zomzimba wakho. Kuya kufuneka uyazi ukuba inokuthi iguqulelwe kweyona uyithandayo.
Esihlahleni: Nangona isenokungabonakali ngathi inokuba yitatoo entle esihlahleni. Ewe kunjalo, kule meko kuyacetyiswa ukuba uyile isityalo ngokwaso, kwaye ngokuthe nkqo, kunye nembewu embalwa esijikelezileyo.
Egxalabeni: Olunye ukhetho olukhethiweyo yile, ngaphandle kwamathandabuzo. Igxalaba lilungu lomzimba apho i-dandelion tattoo inokuba kuye kulo lonke uzuko lwayo. Ngaphezulu kwayo nayiphi na into kuba iya kuba nemilo ethe tyaba, apho sinokwandisa khona imbewu uze uzidibanise noonobumba okanye amabinzana esele siwakhankanyile.
UCuelloIndawo yentamo intle kwaye inesimo esilinganayo. Kungenxa yoko le nto ukuba une tattoo yolu hlobo engqondweni, iya kuba ngaphezulu kokugqibeleleyo. Ubungakanani bayo buya kuncitshiswa, kodwa hayi ubuhle bayo. Amacala entamo nasemva kweendlebe zikhethwe kakhulu ukuba zihonjiswe ngedandelion.
e: Ukuba awoyiki iintlungu ezinokubakho kwiitattoo zonyawo, ke qhubeka. Ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yefayile iindawo ezizithandayo ukubonisa uyilo Ndiyayithanda lento. Indawo esecaleni nayo iya kuba yeyona ibalaseleyo koku.
Iqatha: Iitattoo zeqatha zihlala zinokuqonda. Kodwa kule meko, siza kukhetha uyilo oluhambayo ukuhombisa indawo yeqatha kwaye ugcine unyuka umlenze kancinci. I tattoo ethe nkqo enomtsalane kwaye ihlala ilungile.
IimbamboKumadoda nabasetyhini, Iitatto ezimbanjeni Bahlala besinika imvelaphi enkulu, kwaye bagqibelele kuyilo olukhulu. Ewe, iintlungu ezibonakala kweli tyala ziza engqondweni. Kodwa nangona kunjalo, isiphumo siyakuba sesona siyabulela kakhulu inkanuko yenyama egobileyo.
Ixabiso leDandelion Tattoo
Amaxabiso eTattoo ayahluka kancinci ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye, kunye nohlobo lwe tattoo esithetha ngalo. Kule meko, kukwakho nokwahluka ngokobukhulu, kuxhomekeka kwindawo yomzimba esiyikhethileyo. Sinokukuxelela ukuba ixabiso layo lingahamba ukusuka kwi-80 euro ukuya ngaphezulu kwe-110 ye-euro.
Iifoto zeDandelion Tattoos
Apho kubuhlungu khona ukufumana i-tattoo: jolisa kwezi ndawo zomzimba
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitattoos zeentyatyambo kunye nezityalo » Umvambo weDandelion
Xenia valerko sitsho
Inomdla kakhulu kuyo yonke into! Kodwa usebenzisa ibinzana "ngoku kakuhle" amaxesha amaninzi
Phendula uXenia Valerko
Unyanisile uXenia, sele ndiyihlaziyile iposti. Ngumgca wethegi endinayo ngexesha lokubhalwa kwaye ngamanye amaxesha idlala ngam ngoluhlobo
Molo, Luz !.
Kule meko, ulwalathiso lwe tattoo aluguquli intsingiselo yalo, njengomthetho. Kuba intsingiselo isekwe ngakumbi kwisimboli kunye nomanyano lwezinto zayo kwaye hayi kangako ngendlela ezilungiselelwe ngayo kuyilo lokugqibela. Indawo yomzimba apho siwuthatha khona inezinto ezingaphezulu okanye ezingaphantsi komoya kunye neemvakalelo, kodwa njengoko ndisitsho ulwalathiso ngokwalo, aluchaphazeli. 🙂
Enkosi kakhulu ngengcaciso yakho.
Yintoni eyona intle yokugqobhoza
Intsingiselo yeatatoo yeglassglass